Miolomay izao tontolo izao mikaroka ny hiadiana amin’ny « coronavirus » - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Vanim-potoana tena manokana no iainan’ny firenena eran-tany amin’ity ady amin’ny areti-mandoza tsy hita maso « coronavirus » ity, ary itanan’ny fampitam-baovao samihafa anjara toerana lehibe eo amin’ny fifandraisana sy seraseran’ny olombelona. Tafiditra amin’izany ny herinandro masina sy Paka 2020 izay nampisongadina ny fanarahan’ny vahoakan’Andriamanitra ny fankalazana izany tamin’ny alalan’ny radio sy ny televiziona ary tamina tambajotra sosialy aza ho an’ny sasany. Ankoatra ny fikarohana ara-tsiansa ny fanafody hiadiana amin’ny aretina manko dia manana ny anjara toerany ihany koa ny vavaka eo amin’ny olombelona maro. Ny nahazatra dia ny fiangonana hipoka olona isaky ny andron’ny Paka, fa tamin’ity kosa dia ireo mpisorona no nanao ny fitarihana ny vavaka tsy natrehan’ny mpino tany am-piangonana noho ny fepetra iraisan’ny firenena maro, dia ny fihibohana na « confinement ». Tsy miavaka amin’izany ny teto Madagasikara fa nisy ny fiombonam-bavaka iraisam-pinoana notarihin’ny FFKM, ary teo ihany koa ny an’ny Fiangonana isan-tokony, samy nampitaina tamin’ny haino aman-jerim-panjakana sy tamin’ny tsy miankina. Anisan’ny niavaka tamin’izany ny fandraisana ny Radio Vatican raha ho antsika eto Madagasikara, miaraka amin’ny RDB sy ireo radion’ny diosezy samihafa. Ny vavaka natao dia mitodika amin’ny fangatahana fahasitranana ho an’ny firenena sy izao tontolo izao manoloana ny ady amin’ny fahavalo tsy hita maso, ny tsimokaretina « covid-19 », ary koa ny hanilovan’ny Fanahy Masina ny tsirairay hahita ny lalana tsara iadiana amin’izany.
Tsikaritra raha ny fampitam-baovao samihafa fa tsy dia nifanaraka tamin’ny fepetra napetraka ny fanarahan’ny olona ny fiainana ny fihibohana noho ny antony indrindra ara-pivelomana itadiavana ny hanin-kohanina. Nisy hatrany ny fitangorongoronana amin’ny filaharana amin’ny fiantsenana na fizarana fanomezana, tsy voahaja ny iray metatra eo amin’ny olona milahatra, ary tsy ny olona rehetra no manao saron-tava. Nahavariana ny vahiny avy any ivelany ka nahatenenany hoe « izao ve ny ‘confinement’ ? »
Ao anatin’ny 15 andro faharoa anaovana ny fihibohana i Madagasikara tamin’iny herinandro masina iny, fa mbola raharaha manahirana ny fandaminana ny fizarana vatsy ho an’ny sokajin’olona isan-karazany eto amin’ny tany sy ny fanjakana, raha ny taterin’ny fampitam-baovao samihafa.
Miova isan’andro moa ny antontanisa momba ity aretina « coronavirus » ity, samy manana ny paikadiny araka ny zava-misy any aminy ny isam-pirenena iarenana, ary mikaroka ny fanafody hiadiana aminy. Maneran-tany dia maherin’ny 2 tapitrisa no tratry ny tsimokaretina tamin’ny 15 aprily raha teo amin’ny 1 430 000 izany herinandro talohan’izany, ary maherin’ny 126 000 no namoy ny ainy tamin’io 15 aprily io ihany, raha maherin’ny 93 000 herinandro talohan’izany. Anisan’ny be maty indrindra raha ny isa tamin’ny 15 aprily i Etazonia (maherin’ny 26 000), Italie (maherin’ny 21 000), Espagne (maherin’ny 18 000), France (maherin’ny 15 000) ary Grande Bretagne (maherin’ny 12 000). Ho an’i Madagasikara, dia 110 no nambara fa tratry ny tsimokaretina ary 29 no sitrana tamin’ny 15 aprily raha 93 herinandro talohan’izay, ary tsy misy ny aina nafoy. Ny haino aman-jery, radio sy televiziona eto Madagasikara moa dia « réquisition d’office » amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao ary misy ny fandaharana mivantana mifandraika amin’ny ady atao amin’ity « coronavirus » ity tsy maintsy halefan’izy ireny araka ny ampitaina amin’ny TVM sy RNM, saingy tsikaritra ny tsy fahafaliana sy fahalianan’ny olona amin’ny serasera ataon’ny tompon’andraikitra sasany noho ny fiheveran’izy ireo fa tsy mahafehy ny maha mpanao politika azy izy ireny ka manao fampielezan-kevitra hatrany, hany ka tsy asian’ny olona feo ny televiziona amin’ny fanarahana azy. Ny mpihaino radio moa dia manapaka avy hatrany izany. Arahin’olona ihany kosa amin’ny ankapobeny ny fanazavan’ireo tompon’andraikitry ny fahasalamana toy ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle izay voatendry hitondra ny teny momba ity aretina ity eny amin’ny CCO.